WhatsApp vs Signal - Iza amin'ireo no mendrika? - Ara-Tsosialy
WhatsApp vs Signal - Iza amin'ireo no mendrika?
Lasa ny andro ankehitriny izay nandoavan'olona taloha ny fandefasana hafatra amin'ny alàlan'ny findainy. Aorian'ny firoboroboan'ny IM (fandefasan-kafatra eo noho eo) dia manararaotra ny fotoana ny orinasa toa ny Facebook. IM dia mampiasa Internet handefasana ireo hafatrao.
Ny ampahany tsara indrindra dia maimaim-poana, ary tsy mila mihazakazaka mamaky mitady tilikambo handefasana ny hafatra ianao. Ity lahatsoratra ity dia hampitaha ny roa amin'ireo serivisy fandefasan-kafatra WhatsApp sy Signal malaza indrindra. Horaisina avokoa ny fiasa rehetra, ary amin'ny farany, holazaina ny mpandresy. Andao àry hanomboka.
WhatsApp vs Signal - Fampitahana amin'ny antsipiriany
Ny toetra mampiavaka ny Whatsapp ary famantarana iray dia ny fandefasana hafatra mivantana amin'ny Internet. WhatsApp dia ampahany amin'ny vondrom-piarahamonina Facebook ankehitriny, manome anao fahaizana bebe kokoa hampiasa hery media sosialy. Whatsapp koa dia mamoaka fanavaozana vaovao izay manohana ny UPI sy ny fandoavam-bola amin'ny fifanakalozana, izay tena tsy fahita firy amin'ny serivisy SMS. Azonao atao koa ny mizara clip kely izay hanjavona ao amin'ny WhatsApp. Saingy, io fampiasa io dia tsy misy amin'ny Signal.
Youtube Statistics - Tokony ho Fantatrao
Famintinana ny famantarana
Na izany aza, ny Signal dia manao izany amin'ny fomba azo antoka kokoa noho ny WhatsApp. Misy safidy hitazomana ireo hafatra an-tsoratra mandritra ny 24 ora, ary maro hafa ny protokol fiarovana no ampiasaina. Nilaza ny signal fa tsy misy ny tahirinao voatahiry, izay azo inoana fa tsy ho an'ny WhatsApp. Ireo fampiharana roa ireo dia manohana ny fanakanana ny spam sy ny olona. Ny serivisy dia samy manohana ny fifampiresahan'ny vondrona, ny fitahirizana resaka ary ny antso an-tsary.
Whatsapp dia manana fomba maro loko kokoa amin'ny interface rehetra. Izy io dia manome antoka fa temotra maitso sy fotsy io dia mijanona ho malaza mandritra ny resaka. Izy io dia manohana ny maizina ary koa ny maody maivana. Ny zavatra niainan'ny mpampiasa dia tsy tsara izany. Tokony hanana fahalalana fototra ianao hampandehanana ny App amin'ny fomba feno. Noho ny fisongadinana endri-javatra be loatra, indraindray dia lasa sarotra be amin'ny endri-javatra aiza no misy azy.
2. Interface Signal
Ny interface interface dia kely dia kely. Tsy misy loko miloko toy izany. Ny ampahany tsara indrindra momba ny Signal dia ny interface interface ho intuitive. Ny zava-drehetra dia eo alohanao, na bokotra, vondrona, antso izany. Noho izany dia somary mahazo aina kokoa ny fampiasana ny App.
Ny serivisy rehetra antsoina hoe maimaimpoana dia matetika miaraka amin'ny vidiny ary tsy ny mari-bidy fa ny vidin'ny datao. Na dia milaza aza i WhatsApp fa manana encryption farany, dia somary manjavozavo amin'ny fampiasana azy ny olona. Facebook no manana ny serivisy ary fantatsika rehetra ny politikan'ny angon-drakitra Facebook.
Etsy ankilany, ny Signal dia azo antoka kokoa noho ny Whatsapp. Ny fanamarihana ao amin'ny Signal dia porofo fa manana fiarovana tsara kokoa izy ireo, ary faly ny olona. Ity App ity dia manohana ihany koa ireo hafatra manjavona, izay mahatonga azy io ho azo antoka kokoa. WhatsApp koa dia manana ny mampiavaka ny toerana misy olona; noho izany dia lasa misalasala izy ireo amin'ny fampiasana ny serivisy.
WhatsApp dia afaka niara-niasa tamin'ny orinasa goavambe satria eo ambany Facebook izy io. Ny ankamaroan'izy ireo dia endrika iray mitovy amin'ny Facebook afa-tsy ny rindrin'ny newsfeed. Amin'izao fotoana izao, WhatsApp koa dia miara-miasa amin'ny rafitra Indiana UPI, izay mampiseho ho avy tsy miova.
Signal dia serivisy SMS fotsiny; tsy misy fiaraha-miasa hahatonga ny App hahafinaritra. Na izany aza, ny fiasa dia tsy voakorontana mihitsy ao amin'ity App ity. Tsy hahita 'fanampiny' sasany ianao.
Fifandraisan'ny mpampiasa WhatsApp -
Miaraka amin'ny manodidina Mpampiasa 2 miliara, WhatsApp no ​​fampiharana fandefasan-kafatra voalohany eto amin'izao tontolo izao. Manana fampidinana mihoatra ny 5 lavitrisa ao amin'ny Play Store fotsiny izy (io no isan'ny fisintomana tsy hampifangaro ny isan'ny mpampiasa). Ary koa, WhatsApp dia nampiasa betsaka tamin'ny solosaina tamin'ny alàlan'ny alàlan'ny WhatsApp Web.
Fifandraisan'ny mpampiasa signal -
Na izany aza, mpampiasa Signal dia am-polony tapitrisa. Tsy misy fisintomana 10 tapitrisa fotsiny ao amin'ny Play Store. Toa manana mpampiasa maro noho ny Signal ny WhatsApp, na izany aza, rehefa lasa mifoha noho ny filaminana ny olona dia tsy mety amin'ny WhatsApp ny zavatra.
1. Fahitana fitaovana WhatsApp
Ny serivisy dia misy amin'ny android / iOS / Windows ary koa MAC. Na izany aza, ny zavatra niainan'ny windows dia tsy dia tsara loatra; toy ny fanitarana WhatsApp fotsiny izany. Ireo fitaovana roa ireo dia mila ampifandraisina amin'ny tambajotra iray ihany hampiasa ny serivisinao amin'ny birao.
2. Fahafahana fitaovana famantarana
Na ny Signal aza dia hita amin'ny fitaovana rehetra voalaza etsy ambony. Manana tombony kokoa noho ny WhatsApp izy io, izany hoe, azo jerena ao amin'ny LINUX ho an'ireo mpandrindra programa mba hizara ny kaodiny. Tahaka ny kinova WhatsApp an'ny GitHub. Izy io dia rindrambaiko irery ihany koa izay tsy mila anao hampifandray ireo fitaovanao amin'ny tambajotra iray ihany.
Famaranana: Iza amin'ireo no tsara indrindra?
Mpandray anjara manan-danja Mpandresy:WhatsApp.
Mpandresy amin'ny interface amin'ny mpampiasa:WhatsApp.
Mpandresy amin'ny fiarovana:Signal.
Ny isan'ny mpandresy mpampiasa:WhatsApp.
Mpandresy amin'ny fisian'ny fitaovana:Signal.
Araka ny asehon'ny valiny dia afaka mamoaka ny fandresena eto ny WhatsApp. Satria manana fiaraha-miasa sy mpampiasa bebe kokoa izy dia mamirapiratra hatrany. Ny Signal dia mifototra amin'ny olona izay bebe kokoa amin'ny lafiny teknika ny spectrum. Ankoatr'izay, taorian'ny nividian'ny Facebook ny WhatsApp, dia be loatra ny fiasa. Azonao atao koa ny mandinika ny famolavolana minimalistic sy ny endrik'ilay App nomen'ny Signal.
Manantena aho fa nahazo mazava momba ny App izay safidinao ianao rehefa misintona. Ny hany tombony ananan'ny Signal amin'ny WhatsApp dia ny filaminana. WhatsApp dia afaka manome bebe kokoa amin'ny lisitry ny endri-javatra tsy misy farany. Raha manana hevitra na fanontaniana hafa momba ny What App sy Signal ianao dia ampahafantaro anay ao amin'ny boaty hevitra etsy ambany.
Ny tsatòkan'i Belmont dia nanambara ny fahafaha-manao 50,000 ho an'ny hetsika 11 Jona!
Willow Ilay Sarimihetsika tsy azonao adino
Ahoana ny fanatsarana ny hulu amin'ny spotify
kaody hira roblox an'ny boombox
amin'ny fotoana rehetra / ampidino ny paoma tv
youtube ho mp3. org
maninona aho no tsy afaka mifandray amin'i iTunes